Izindaba - 2020 September Wenzhou International Optical Fair
I-18th Wenzhou International Optical Fair (WOF 2020) izobanjelwa e-Wenzhou International Convention and Exhibition Center kusuka ngoSepthemba 18 kuya ku-Septhemba 20, 2020!
Isikali salo mbukiso sizofinyelela kumamitha-skwele angama-30,200 wendawo yokubonisa, nezinkampani ezingaphezu kuka-410 ezisuka eGuangzhou naseShenzhen eGuangdong, eXiamen eFujian, eDanyang eJiangsu, eXinhe e-Hebei, e-Yujiang e-Jiangxi, eRongchang e-Chongqing, e-Cangxi eSichuan, I-Linhai ne-Yuhuan eZhejiang, ne-Ouhai e-Wenzhou. Amaqoqo emikhakha kazwelonke yezingilazi efana neRuian neRuian ahlangana ndawonye, ​​namabhizinisi avela eShanghai, Shaanxi, Ningbo, Zhejiang, Foshan, Guangdong nakwezinye izindawo ajoyina ukusekelwa.
Imibukiso ifaka ozimele be-optical, izibuko zelanga, izibuko zezemidlalo, izingilazi zezingane, izibuko zokufunda, amalensi nezikhala, ukufakwa kwezibuko, izinto ezingasetshenzisiwe nezisizayo nezinsiza, amathuluzi akhethekile, imishini yokukhiqiza, imishini ye-optometry nemishini, amalensi wokuxhumana nemikhiqizo yokunakekela, imishini yokufaka ingilazi nezinto zokwakha, njll. Indawo yokubukisa ibuye isungule indawo yokubonisa yabaklami bezingubo zamehlo baseChina nabangaphandle, indawo yokubonisa izibuko nezibuko zokuzivikela, indawo yesibuko bukhoma, nendawo yesevisi yezithameli ukudala ukuxhumana okuchwepheshe kwebhizinisi kanye nepulatifomu yokushintshana ngolwazi ngomkhakha wemboni yamehlo.
Ngemuva kweminyaka yezimvula embonini, iWenzhou International Optical Fair ibuthele idatha eningi yabathengi, idatha yesitolo se-optical, idatha yebhizinisi likazwelonke, futhi yaqoqa idatha enkulu yabathengi embonini kazwelonke ye-optical. I-Wenzhou International Optical Fair izosebenzisa izingcingo, imiyalezo, ama-imeyili, nezikhangiso zangaphandle. , Ukukhangisa okuku-inthanethi, ukukhuthazwa kwemidiya nezinye iziteshi ukufinyelela abathengi nokuhlinzeka ababonisi ngokufana kwebhizinisi okunembe kakhulu.
Abaklami bokuqala nemikhiqizo evela e-Italy, Germany, Canada, njll babambe iqhaza kuyo. Ngemuva kokuhlolisiswa kanzima, imikhiqizo eklanywe kahle eyedlula yonke ehambelana nombukiso wesigcawu yakhethwa ukwenza idili lomhlaba wonke elibukwayo.